C/laahi Yuusuf iyo Mela Zanawi oo shir Alaabadu u xidhanyihiin wada qaatay | maakhir.com
C/laahi Yuusuf iyo Mela Zanawi oo shir Alaabadu u xidhanyihiin wada qaatay
Adis-Ababa Warar ogogaal ah oo aanu ka helayno Magaalada Adis-Ababa ee Xarunta Dalka Itoobiya ayaa waxay shaaca ka qaadayaan inay habeenkii xalay ahaa ay kulan xasaasi ah wada qaadeen Madaxwaynaha Dawlada Somaliya C/laahi Yuusuf Axmde iyo Raisalwasaaraha Dalka Itoobiya Melazanawi,waxa la soo sheegayaa inay labadaasi masuul aad uga wada hadleen arimaha Somaliya.
Ilo war gal ah oo ku dhaw xafiis C/laahi Yuusuf ayaa war baahinta u sheeg inay C/laahi Yuusf iyo Zanawi ay aad u jeex jeexeen arimaha haatan ka taagan dalka Somaliya,iyada oo C/laahi Yuusuf war bixin dheer ka siiyay Dalka Itoobiya xaaladii ugu danbaysa ee Dalka Somaliya ka taagan.
C/laahi Yuusuf ayaa waxa la sheegay inuu Mela Zanawi ku dhiiri galiyay inay ciidamadiisu ku sii negaadaan Gudahada Dalka Somaliya, arintaasi ayaa Madaxwaynuhu waxa uu sabab uga dhigay Dagaalada sii laba lixaad sanaya ee ka socoda Caasimada Muqdisho.
Dhanka kale warar hoose ayaa iyana sheegaya inay Zanawi uu C/laahi Yuusuf la soo qaaday in dhex dhexaadin laga dhex abuuro Kooxaha dagaalka Dalka Somaliya ka wada iyo Dawlada Federaalka, si meesha looga saarao dagaalada iyo rabshadaha ay dadka badani ku dhinteen.
Arinkaasi Zanawi uu la soo qaaday C/laahi Yuusuf ayaa waxa la soo tabinayaa inuu aad madax uga ruxay Madaxwayne Yuusf isaga oo farta ku fiiqay inay Dawlada Somaliya wax badan ku daashay sidii ay gol gol wada hadal ugu fidin lahayd Kooxahaasi balse ay mar kasta iyaga sii fogaanayeen.
Wararka kale oo aanu iyana ka helayno Xarunta Dalka Itoobiya ee Adis-Ababa ayaa sheegaya inay maanta kulmayaan C/laahi Yuusuf iyo Raisawasaaraha Dawlada Somaliya Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde) waxa la soo tabinayaa inay isla soo qaadi doonaan arimo badan oo ka mid tahay kulamadii uu Raisalwasaaruhu la yeeshay wax garadka Magaalada Muqdisho ,iyo waliba shirkii Hogaamiyaasha Afrika ee Adis-Ababa dhawaan lagu soo afmeeray kaasi oo uu Dalka Somaliya u metelayayay Raisalwasaare Nuur Cadde.
Madaxwayne Yuusf ayaa waxa uu Dalka Itoobiya soo gaadhay dhawaan isaga oo ka soo boqoolay Magaalada London oo uu xaalada Caafimaad u joogay,dhawaan ayaa la filayaa inuu Madaxwaynuhu u sadcaalo dhanka Magaalada Baydhabo ee Xarunta Baarlamaanka Somaliya.
« Talyaaniga ayaa Xeebaha Dalka Somaliya u soo diray Maraakiibtiisa Dalgaalka
Xildhibaan ka tirsan Dawlada Somaliya ayaa is Casilay »